Martech egosi na bizMarketing Magazine | Martech Zone
Martech egosi na bizMarketing Magazine
Tuesday, October 9, 2012 Tuesday, October 9, 2012 Douglas Karr
Ọ bụrụ n’inweta ohere, debanye aha maka ndenye aha nke bizMarketing Magazin. N'oge na-adịbeghị anya, ha biputere akụkọ anyị banyere uto na ọdịnihu nke SocialTV. Ọ bụ nnukwu ihe ịhụ anyị n'akwụkwọ, na magazin dijitalụ jupụtara na isiokwu dị ukwuu na ọtụtụ ndụmọdụ.
bizMarketing Magazine na-enye ulo oru ntaneti na ndi okacha amara di iche iche di iche-iche edeputara ederede ka edebe gi aka na ihe ohuru na agbanwe agbanwe n’uwa ahia na ntanetị. Kwa ọnwa ọ bụla na-agụnye nhọrọ nke ụfọdụ ọdịnaya kachasị mma dị na ịntanetị, yana isiokwu pụrụ iche edere maka ndị na-agụ akwụkwọ anyị.
Tags: bizmarketingipad mbipụtamagazineAhịa magazine
Usoro okike nke Lifecycle Marketing